Mishonga yeNhomba yeCovid-19 Yosvika neMuvhuro Ichibva kuChina
Zimbabwe ichatanga kugamushira mishonga yenhomba yekudzivirira denda reCovid-19 kubva kuChina nemusi weMuvhuro unouya uye vamwe vashandi vezvehutano vanoti mushonga uyu unofanira kutanga waongororwa usati hwapihwa kwavari pamwe neveruzhinji.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota wekutanga gore rino, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, Seneta Monica Mutsvangwa, vakati mishonga yava kapihwa pachena neChina pamwe nemimwe yakatengwa nehurumende ichatanga kusvika munyika svondo rinouya nemusi weMuvhuro.
Vakatiwo mumwe mushonga unotarisirwa kusvika munyika musi wa1 Kurume uye hurumende ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kuvadzirira kuCovid-19 ichitanga nemachiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara.
Nyanzvi nevashandi vehutano vanoti hurumende iri kutora matanho akanaka pakuunza mishonga iyi asi panofanira kuitwa ongororo yekuti inoshanda zvakanaka here muZimbabwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vakoti, reZimbabwe Nurses Association, VaEnock Dongo, vanoti kunyange hazvo vari kufara kuti hurumende iri kuvatungamidza pamberi pakutanga kubaiyiwa nhomba yeCovid-19, panofanira kutangwa paitwa ongororo yekuti mushonga uyu unoshanda muZimbabwe here vasati vabaiwa veruzhinji.
Vaimbove gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa, zvakare vari munyori anoona nezvehutano muMDC Alliance, Dr Henry Madzorera, vanotsigirana naVaDongo vachiti zvakosha kuti hurumende iite ongororo yekuti mushonga uyu unoshanda zvakadii muZimbabwe.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanachiremba, reMedical and Dental Private Practitioners Association, Dr Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti kuongorora mushonga uyu usati watanga kushandiswa kunodzivirira.
Asi Amai Mutsvangwa vanoti hurumende ichatevedza hunyanzvi hwesainzi panyaya dzemishonga yekudzivirira Covid-19.
VaDongo vanoti kunyange hazvo vasati vave neruzivo hwekuti hurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 huchafamba sei kana kutanga rini, havawoni sekuti zvinganetse kubaya vanhu sezvo vagara vachibaya vanhu nhomba dzezvimwe zvirwere.
Kunze kwemishonga iri kubva kuChina, Amai Mutsvangwa, vakazivisawo kuti hurumende ine hurongwa kwekutenga mishonga yeCovid-19 kubva kuIndia neRusssia.
Amai Mutsvangwa vanoti Zimbabwe ichatumira ndege kuChina kunotora mishonga yenhomba yeCovid-19 kuitira kuti ipinde munyika musi waKukadzi 15, 2021.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti nhomba dziri kubva kuChina hadzisati dzaitwa ongororo muZimbabwe yekuona kuti inoshanda zvakadii sezvinodiwa nemitemo yenyika mishonga iyi isati yapihwa veruzhinji munyika.
Ongororo idzi dzinotora mwedzi yakati kuti dzichiitwa pachikwata chevanhu mishonga iyi isati yapihwa veruzhinji.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vanoti zvinhu zvose zviri mugwara.